Voina · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Marsa, 2018
Ejipta28 Marsa 2018
Amerika Latina26 Marsa 2018
Azia Atsinanana25 Marsa 2018
Nanjary 'Hazon'aina' ara-bakiteny ny Hazo Dita 12 metatra tao Metro Manila rehefa nampiasaina ho fialofan'ny mponina izay voafandrika tao an-tranony nandritra ny tondradrano sy ny oram-batravatra. Lesona: Aza tapahina ny hazo.
Karaiba24 Marsa 2018
Myanmar : Lahatsary Avy Amin'ny Mponina Taorian'ny Fandalovan'ny Rivodoza Nargis
Myanmar (Birmania)18 Marsa 2018
Na teo aza ny fandraràna natao tamin'ireo mpanao gazety napetraky ny junta Birmàna mpitantana ny firenena, dia nivoaka ihany ny olona ary naka sary ny zava-misy marina niainan'ireo niharam-boina tamin'ilay loza voajanahary. Ny 2 May 2008, nandalo tao Myanmar (Birmania) ilay rivodoza Nargis, izay nahatonga fahasimbana goavana ary an'arivony ireo olona namoy ny ainy sy ireo tsy hita popoka.
Manasongadina ny Olan'ny Lalànan'ny Fitenenan-dRatsy An'Andriamanitra sy ny Tsy Fisaziana ao Pakistan ny Didim-Pitsarana Amin'ny Raharaha Mashal Khan
Azia Atsimo08 Marsa 2018
"Famonoana ho faty iray sy fanagadrana mandra-pahafaty dimy tamin'ny fitsaram-bahoaka noraketina an-dahatsary? Azo itokisana fa nihoatra ny enina ireo olona nandray anjara."